Mathematics Books
Thread: Mathematics Books
01-18-2013 09:37 PM #31
Thanked 510 Times in 154 Posts
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က သချာင်္ကို 4th year အထိယူခဲ့ရပြီး application နဲ့တွဲမသင်တော့ နားလည်ဘို့အလွန်ကိုခက်ခဲခဲ့တာ။ ဒီ calculus စာအုပ်ကတော့ တကယ့်လောကပြဿနာတွေကိုအစပျိုးပြီးတာ့ integral/differential တွေဘာလို့လိုအပ်တာလဲ ဆိုတာမျိုးကစကိုင်တယ်။ ပြီးမှ တခုချင်းရှင်းသွားတာမျိုး။ မြန်မာပြည်မှာ ဒါမျိုးစာအုပ်တွေလိုတာဗျ။
သချာင်္သမားတွေကတော့ စာအုပ်နာမယ်မြင်ရုံ နဲ့ calculus မှန်းသိကြမှာပါ။ Newton ရဲ့ quote ကိုယူပြီး title ပေးထားတာဆိုတော့။
Post လုပ်ပြီးမှ ကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့တုန်းက ပညာရေးအကြောင်းနဲနဲ မှတ်ချက်ပေး (လျှာရှည်) ချင်လာတာနဲ့ ဖြည့်ရေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းတုန်းက maths ဆရာကလဲ pure maths ချည်းသင်တယ်။ physics နဲ့ engineering ဆရာတွေကလဲ problem တွေ proofတွေမှာ ဘယ်လို mathematical treatment တွေကိုသုံးထားတယ်၊ ဘာလို့သုံးရတာလဲ ဒါတွေကို မပြောပြခဲ့ဘူး။ equation တွေကို လေထဲကရတဲ့အတိုင်း ကောက်ယူပြီး သုံးသွား၊ သင်သွားတယ်။ Proof တွေကိုကောင်းကောင်းလဲမသင်ခဲ့ရပါဘူး။ အသေမှတ်စရာတခုအနေနဲ့ဘဲ သိခဲ့ကျက်ခဲ့ရတာမျိုး။ ကျွန်တော်ဆရာတွေကိုအပြစ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့မှာလဲ limitation အမျိုးမျိုးတွေကြားက ရအောင်သင်ရတာကိုး။ သို့ပေမဲ့ ..အဲဒါကြောင့်. အဲဒီလိုကျောင်းတွေကမွေးထုတ်လိုက်တဲ့ ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ လုပ်နည်းကားတွေ လောက်ကိုသာသိတဲ့ technician တွေသာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြတယ်။ အသိပညာအခြေခံက ကန့်သတ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာမျိုးကိုး။ ဒီအချက်ကို ခုခေတ်မှာပြင်ဘို့ ကောင်းပါပြီ။
Last edited by neonlm; 01-19-2013 at 10:58 AM.
The Following3Users Say Thank You to neonlm For This Useful Post:
Ko-Naing, tharrgyi, William Paul
06-18-2013 10:16 AM #32
အားလုံးအိုကေပါတယ်.. sign up လုပ်ပြီး စက္ကန့်၂၀စောင့်ပြီးရင်ရပါပြီ.. ကွန်ပျူတာမှာ iLivid ကိုဒေါင်း.. အင်စတောလုပ်.. ကော်ပီကူးထားသော လင့်ကို အင်စတောလုပ်ထားသော ဆော့ဝဲလ်(iLivid ) မှာ past လုပ် ဒါဆိုရင် connectionဆိုပြီးပေါ်ပါတယ်. နောက် တော့ စကန့် ၂၀စောင့်ပါ(for only free account member)ပြိးရင်သူ့ဘာသာသူဒေါင်းပါတယ်..
စာအုပ်များကိုတင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျနော်သင်ချာကို တော်တော်အခက်အခဲဖြစ်နေတာပါ.. အထူးသဖြင့် calculus ပါပဲ.. ကျေးဇူးပါ..
ဒေါင်းပြီးပြီဗျ.. ဒါပေမယ့် ဖိုင်တွေက pdf ဖိုင်နဲ့မပြပဲ.. html နဲ့ browser ကနေပွင့်နေတယ်.. ပြိးတော့ စာတွေက ဖတ်မရဘူး.. ကူပါဦးဗျာ....
Last edited by komin2009; 06-18-2013 at 12:08 PM.
The Following User Says Thank You to komin2009 For This Useful Post:
10-04-2014 11:58 AM #33
MEF isagood forum for us.
Quick Navigation သင်္ချာ Top
CATIA Tutorial E-books
By ~Charm~ in forum Catia
Last Post: 09-12-2011, 03:52 PM
By TheSun in forum အခြား စာအုပ်များ
Last Post: 03-10-2011, 07:13 AM
By Luminox in forum စားကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း
Last Post: 05-03-2010, 07:55 PM
By MG MYO in forum အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
Last Post: 07-27-2009, 09:02 PM
By kolugyi in forum အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ စာအုပ်များ
Last Post: 10-16-2008, 07:25 AM